मेस्सीप्रति फ्यानहरुको विश्वासः यसपटक त निराश बनाउँदैनन् होलान् नि ?
एजेन्सी । अर्जेन्टिना र बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी हुन् लियोनल मेस्सी । उनले क्लबका लागि धेरै नै उपाधि जितेका छन् । क्लबका मामिलामा उनको कमै आलोचना हुन्छ ।
अर्जेन्टिनले गर्यो गोलको वर्षात्
एजेन्सी । आज बिहान भएको मैत्रीपुर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाले निकारागुआलाई ५–१ गोलले पराजित गरेको छ ।
मेसी बलोन डी’ओरको दावेदार हुन्ः भ्यान डायक
एजेन्सी । लिभरपुलका डिफेन्डर भिर्गिल भ्यान डायकले लियोनल मेसी बलोन डी’ओरको दावेदार रहेको बताएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा टोटनहमलाई पराजित गरेर उपाधि जितेपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भ्यान डायकले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
'मेस्सीले मलाई गधा भने'
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी च्याम्पियन्स लिगमा भएको एक घटनालाई लिएर चर्चामा रहेका छन् ।
जब यी अष्ट्रेलियन खेलाडीले मेस्सी र रोनाल्डोबारे यस्तो प्रतिक्रिया दिए
एजेन्सी । बिगत एक दशकदेखि बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी र युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच को सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भन्ने विवाद चलिराखेको छ ।
म मेसीको अभ्यास हेर्न आतुर छुः डी जोङ
एजेन्सी । नेदरल्याण्डको घरेलु लिग इरिडिभिसीको उपाधि जितेपछि विन्टर ट्रान्सफर विन्डोमा नै बार्सिलोना आउने सहमति जनाइसकेका मिडफिल्डर फ्रांकी डी जोङले आफू मेसीको अभ्यास हेर्न आतुर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
के मेस्सी साँच्चिकै अभागी खेलाडी हुन् त ?
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी गएको हप्ता चर्चाको पात्र बने भने यस हप्ता आलोचनाको पात्र । उनलाई कतिपय समिक्षकहरुले अभागी मेस्सी पनि भन्न थालेका छन् ।
कतै बार्सिलोनाले गएको सिजनको नियती यस सिजन पनि भोग्ने त होइन ?
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोना एनफिल्डमा लिभरपुलविरुद्ध खेल्न डराइरहेको केही समिक्षकहरुले बताएका छन् ।
‘धन्य भगवान् मेस्सीविरुद्ध प्रत्येक सिजन खेल्न परेको छैन’
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीको दमदार खेलपछि लिभरपुलका डिफेण्डर भिर्जिल भ्यान ड्याकले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मेस्सीविरुद्ध प्रत्येक सिजन खेल्न नपाउँदा आफु खुसी रहेको बताएका छन् ।
एजेन्सी । फ्रेन्च क्लब मार्सेका स्ट्राइकर मोरियो बालोटेलीले बार्सिलोनाका फरवार्ड लियोनल मेसीसँग युभेनट्सका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोको तुलना हुन नसक्ने बताएका छन् ।